Farshaxanku wuxuu midabeeyaa jidka loo maro - Maarso Adduunka
Home » Noticias » Qoraalada saxaafadda » Farshaxanku wuxuu midabeeyaa jidka loo maro
Farshaxanku wuxuu midabeeyaa jidka loo maro
04 / 05 / 2020 14 / 03 / 2020 by Antonio Gancedo
Intii lagu jiray World Maarso, ku dhawaad ​​ficil kasta, muuqaallo fara badan oo farshaxan ayaa bilaabay in lagu madadaaliyo, haddii aysan ahayn gaaska ugu weyn ee muuqaalkooda.
Waxaan horeyba u soo sameynay soo koobitaankii ugu horreeyay ee nashaadyada farshaxanka ee socodsiinta maqaalkii Farshaxanka Farshaxanka Adduunka Maarso.
Tan, waxaan ku sii wadi doonnaa booqashada muuqaalka faneed ee la muujiyey intii lagu jiray socodkii Maarso 2-da Maarso.
1 Afrikada dhexdeeda, Sawir qaade, qoob ka ciyaarka iyo rap
2 Rinjiyeha Lola Saavedra iyo Sawirrada Nabadda
3 Farshaxanka Hindida Nabadda ee Badda Mediterranean
4 Dalka Talyaaniga, waxaa ka socda dadaallo badan
5 Markaad ka sii gudubtid Koonfurta Ameerika, farshaxanku wuxuu haystay meel dhexe
6 Aasiya qoob-ka-ciyaarka qoob-ka-ciyaarka
7 Dhanka Yurub, Bel Canto
8 Bishii Marso ee Madrid ayaa la soo gabagabeeyey
9 Iyo waliba dhamaadka safarka
Afrikada dhexdeeda, Sawir qaade, qoob ka ciyaarka iyo rap
Guud ahaan, marinka loo maro Afrika ee 2-dii Maarso, koox sawir qaadayaal ah daboolay dhammaan dhacdooyinka. Farxadda dhalinyarada iyo aqoonta wanaagsan ayaa iyaga iftiimiyey.
Jawiga jawiga caafimaad qabka ah iyo awooda dhalinyarada, afarta sawir qaade iyo sawir qaade ayaa kahadlay 2da bisha Maarso ee Nabada iyo Xad gudubka. Morocco.
Markaad gashid Senegal, magaalada Saint Louis, galabnimadii Oktoobar 26, xarunta Don Bosco ayaa ka dhacday, munaasabad lagu soo bandhigayay World Marso, oo qayb dhaqameedkoodu ka kooban yahay metelaad kooxdii tiyaatarka ee Juvep, Faragelinta Jeneral Kheuch iyo slamero Slam Issa oo leh jawi wanaagsan.
Rinjiyeha Lola Saavedra iyo Sawirrada Nabadda
Farshaxanka caaga ah ee Coruña Lola Saavedra waxay lashaqeeysaa farshaxankeeda "2-da bisha Maarso ee Nabadda iyo Rabshadda" taasoo sameyneysa shaqooyin muujinaya qiimaha Nabadda, Wadajirka iyo Rabshadda.
Muddadii bisha Maarso dhacdo munaasabad farshaxan ah ayaa la furay A Coruña, Spain loo yaqaan SAAMAYNTA NABADGELYADA iyo NOVIOLENCE, Coruña.
Farshaxanka Hindida Nabadda ee Badda Mediterranean
Mida kale, farshaxanka nabada ayaa faafay soona dhoweeyey dadaalka badaha ee 2da Maarso, Badda Mediterranean ee badda.
Dhinac, Bamboo, doonta la raacay safarka hindisaha ayaa qaaday tusaale muunad ah oo ka mid ah sawirradii Nabadda ee ay kumanaan carruur ah sameeyeen oo ku jira hindisaha. Midabada Nabadda.
Dhanka kale, dekedaha yimid waxay ka qayb qaadanayeen munaasabado kala duwan had iyo jeer iyagoo la socda farshaxanka la socda.
Sidaas darteed, Marseille, ee Thalassantè: Nabadda oo loo heesto, oo aan isla heesno sidii aan isu dhegeysan lahayn si aan codkeenna u mideeyo. Waana sidaa sida aan u yeelno: waan heesaa, u hadalnaa oo dhagaysannaa waayaha kuwa kale. ” Halkaas ayaan dhammaanteen uga qayb qaadnaa heesidda heesaha 31 2020 Oktoobar.
Magaalada Barcelona, ​​ficilkii lagu fuliyay markabkii "Preace Boat" oo ay ka badbaadeen Hiroshima iyo Nagasaki adduunka oo dhan ku faafinaya farriinta Nabadda iyo ka hortagga bambooyinka nukliyeerka, farshaxanka ayaa sidoo kale laga dareemi karaa:
Halkaa waxaa lagu soo bandhigay sawirrada carruurta ee "Midabbada Nabadda", La Hibakusha, Noriko Sakashita, waxay ku bilaabeen ficil iyagoo xusaya gabay "Nolol subax", oo ay la socdaan qolka Miguel López, kuna ciyaarayay "Cant of Peace". dels Ocells ”oo uu qoray Pau Casals, kaasoo dhagaystayaasha dhex jiifa jawi shucuur leh. Marka waxaan ku arki karnaa qodobka Ururada ICAN ee ku jira Boatka Nabadda.
En Sardinia, Badmaaxiinta Bamboo, waxay isku dhex qariyeen asxaabta shabakadda "Muhaajiriinta Muhaajiriinta", halkaas oo "Astaamo ahaan aan isku mideyno silsilad xariif ah oo midkeenba midka kale ku mideyso shabakad ku lug leh dareen ahaan."
Ugu dambeyntiina, Badda Badweynta Nabadda, intii u dhaxeysay Nofeembar 19 iyo 26, waxay xiraysaa lugtii ugu dambeysay safarka.
Livorno, kulan ayaa lagu qabtaa Old Fortress-ka:
“Martida waxaa sidoo kale ka mid ah Antonio Giannelli, oo ah madaxweynaha midowga midowga Nabadda, oo aan u soo celineyno nambarka Nabadda iyo 40 nashqadeynta nambarka midabada Nabadda, guud ahaan in ka badan 5.000, kuwaas oo leh Nala soo raacay badda dhexdeeda.
Antonio wuxuu ka sheekeeyay khibradda uu u leeyahay ururkiisa, oo xaruntiisu tahay Sant'Anna di Stazzema, oo ah magaaladii 1944 qof ay ku xasuuqeen Naasiyiinta sanadkii 357, 65 ka mid ah waxay ahaayeen caruur. ”
Dalka Talyaaniga, waxaa ka socda dadaallo badan
Talyaaniga waxaan awoodnay inaan ka soo qeybgalinno nashaadyo fara badan oo ay ku midoobeen iskaashatada iyo farshaxanka xagjiriinta.
Fiumicello Villa Vicentina, waxay kor u qaaddey howlo badan oo howsha farshaxanku iftiimisay:
Jimcaha 06.12 the show musical "Magicabula" oo ay soo saareen Ururka Dhaqanka "Parcè no? ... sixirka Kirismasku wuu ku qarsoon yahay midkeen kasta ...
Waxaa ka mid ah waxqabadka dhiirrigelinta ee Maarso 2-da Maarso, waxqabadka tiyaatarka.
Sabtidii 14.12 markay ahayd 20.30 shirkadda tiyaatarka Lucio Corbatto oo ka socota Staranzano waxay qabatay: Waxaan ku raaxeysanay Campanilismi, afar ficil oo aan caadi aheyn oo uu sameeyay Achille Campanile.
The Titas Michelas Band ayaa dhiirrigelinaya Maalinta Maarso inta lagu gudajiro riwaayadda Epiphany
Bishii Janaayo 6deeda Banda Tita Michelàs waxay bulshada Fiumicello Villa Vicentina u soo bandhigtay riwaayado wanaagsan ee sanadka 2020.
Majaajillada qolka Bison: waxqabadyada kirismaska ​​gudahooda, majaajillada "Serata omicidio" iyo "Venerdì 17" ayaa la matalay.
Sabtida, Diseembar 21 iyo Axadda, Diseembar 22, 2019, qolka 'Bison' ee Fiumicello Villa Vicentina, saacaddu markay tahay 20:30 p.m., Riwaayadaha tiyaatarka ee Shirkadda Philodramatic
Ugu dambeyntiina, "daqiiqad qurux badan oo lala wadaago Fiumicello":
Sabtidan la soo dhaafay, 22/02/2020, waxaan la joognay Scouts of Fiumicello, waxaan qoreynaa oo rinjiyeynaa Nabadda iyo Rabshado.
Sabti 22/02/2020 galabtii Fiumicello 1 indha-indheeye ayaa nagu soo booqday goobtooda: waxay kahadleen Nabada iyo Colaada. Waan wada heesaa.
Nabadda, mid walbaa wuxuu qoraalo ku dhejiyaa waxa uu naftiisa u matalayo.
Iyo, Vicenza, "Muusig iyo ereyo nabadeed" Rossi:
Muddo labaatan maalmood ah ka hor Maarso Adduunka ee Nabadda iyo Dagaal-la'aanta ayaa ka gudbay Vicenza, guddiga dhiirrigelinta Vicenza, iyada oo ay iskaashanayaan fannaaniinta Pino Costalunga iyo Leonardo Maria Frattini, oo loo habeeyay Jimcaha, Febraayo 7, at 20.30 pm, machadka “Rossi” (oo loo maro Legione Gallieno 52), bandhigga "Music iyo Erayada Nabadda".
Nasiib darrose, markii ay soo ifbaxday COVID-19 iyo tallaabooyinka xiritaanka ayaa lagu go’aamiyay in la joojiyo faafitaanka, dhammaan howlaha la qorsheynayey ee ku saabsan marxaladda 2-da Maarso waa in la baajiyo.
Waxaa jira ballanqaad in hawlahan ay dhacayaan deyrta sanadkan.
Mar dhow baan ku arki doonaa, Talyaani!
Markaad ka sii gudubtid Koonfurta Ameerika, farshaxanku wuxuu haystay meel dhexe
En Ecuador, Mu'asasada Fine Arts iyo World la'aan Wars iyo La'aanta Rabshadaha ayaa ku biiray xoogaga si ay u soo bandhigaan markii ugu horeysay Bandhig Faneedka Guayaquil ee Nabadda iyo Rabshadda. Guud ahaan 32 farshaxan oo isugu jira muwaadiniin iyo ajaanib ayaa ka qeyb galaya munaasabaddan oo la furay 10-ka Diseembar 2019, XNUMX
En Colombia, intii u dhaxeysay Nofeembar 4 iyo 9 waxaan ka soo qeybgalnay caleemo saarka dhowr farshaxan.
Isla maalintaas, at the Universidad Bogotá Bogota Colombia, farshaxankii ayaa la furay Garabka Nabadda iyo Xoriyadda ee Master Ángel Bernal Esquivel.
Burburkii Silo ayaa la furay, Mario Luis Rodríguez Cobos, aasaasaha Dhaqdhaqaaqa Aadamiga ee Universalist. Ficilka, Rafael de la Rubia, qoraha, wakiillada MSGySV ee Kolombiya iyo mas'uuliyiinta.
En Perugudaha howlaha farshaxanka-dhaqanka 17kii Disembar, Arequipa, waxaa lagu qabtay xaflad dhaqameed farshaxanimo ah.
Markay ahayd Disember 19, howlihii way sii wadeen Tacna, soo dhaweynta Kooxda Salka ee 2-da Maarso waxaa lagu qabtay tirooyin farshaxan goobta madasha Michulla.
Sidaad ag marayso Argentina, Kooxda saldhigga, Barashada taariikheed iyo milicsiga ee Punta de Vacas, waxaa heesaha ka helay magaalo u dhaw. Hees farxad leh oo ay ka buuxaan ujeedooyinka ugu wanaagsan.
Waxaan sidoo kale kaqeyb galnay caleemo saarka "Darbi" qurux badan. Rafael iyo Lita waxay soo bandhigeen Mural ay sameeyeen asxaabta qaar ka mid ah bulshada La Plata.
Rafael de la Rubia wuxuu ka hadlay inay jiraan "calaamado" kale oo la socday bishii Maarso, sidii Kolombiya, halkaas oo Plaza uu ku yaallo magaca Silo iyo jillaabkii Silo.
En Chile, ganacsadayaashu way ka qayb galeen meditation, march iyo xaflad farxad leh:
Bishii Maarso iyada oo loo marayo wadooyinka xaafadaha iyada oo sheeganeysa baahida loo qabo in isbedel weyn lagu sameeyo hay'adaha iyo dadka.
Xafladda, bandhigga farxadda wuxuu ku wajahan yahay inuu muujiyo ruuxa loo baahan yahay in la sameeyo, farxadda lagu caddeeyo mustaqbalkulqubasho.
Aasiya qoob-ka-ciyaarka qoob-ka-ciyaarka
Hawlaha kale ee ka mid ah, Aasiya dhexdeeda, gudaha Hindiya, waagii hore, ganacsatada waxay ka fikireen dhaanto qurux badan.
Dhanka Yurub, Bel Canto
En Francia, ficilo kaladuwan ayaa loo diyaarshay heesaha sida protagonist-ka.
On February 7, 2020 in Rognac, ururka ATLAS soo bandhigay iska caabin farshaxan show cinwaankiisu yahay "Waxaan nahay xor,, Iyada oo la raacayo qaab-dhismeedka Maarso 2-deedii ee Nabadda iyo Rabshadda.
Iyo Augbagne, waxay ku qabteen “U hees qof walba".
Jimcihii, Febraayo 28, 2020, qaab dhismeedka Maarso 2-aad ee Nabadda iyo Dagaal-la’aanta, habeen heeso bilaash ah ayaa lagu qabtay Aubagne, oo u furan dhammaan.
Munaasabadan ayaa waxaa soo abaabulay ururka EnVies EnJeux.
Waxaan u heesaa qofwalboo Aubagne ah: https://theworldmarch.org/canto-para-todos-y-todas-en-aubagne/
Bishii Marso ee Madrid ayaa la soo gabagabeeyey
8-dii Maarso, Calanka 2-aad ee Nabadda iyo Colaadda Rabshadaha ayaa ku dhammaaday magaalada Madrid.
Intii u dhaxeysay Maarso 7 iyo 8, howlaha xiritaanka Maarso ee Madrid.
Subaxdii 7-aad ee aroortii Xarunta Dhaqanka del Pozo ee xaafada Vallecas, a riwaayad mataano ah u dhexeeya Iskuulka Núñez de Arenas, kooxda heesaha Pequeñas Huellas (Turin) iyo Manises Cultural Athenaeum (Valencia); boqol wiil iyo gabdhaba waxay sameeyeen qaybo muusig oo kaladuwan, iyo heeso rap ah.
Iyo subaxa hore ee 8-deedii, ficilkii ugu dambeeyay, oo ay weheliso wakiillo astaan ​​u ah bini-aadamnimada midab-kala-sooca, wuxuu si xor ah u siiyay qoob-ka-ciyaarka iyo heesaha caqiido. Halkaa, Jid weyn, ayaa heesta qoto dheer ee xoreynta haweenka waxay ku dhalatay codka Marian Galan (Haweenka Nabadda raacaya). Codsi ayaa sidoo kale laga soo qaatay haweenka sidii daryeeleyaasha Dhulka Hooyo.
Iyo waliba dhamaadka safarka
Ecuador sidoo kale waxay qabatay howlo waa maalinta dhamaadka bisha labaad ee adduunka.
Cilmiga Dhaqanka Ecuador wuxuu sidoo kale goob joog ahaa, kuna labisnaa dharka wakiiladeena buuraheena, dhaanleyda oo wata calaamad gacanta ku leh "AYAA NABAD KU SAMEEYAA, WAA IN AAN LAGU SAMEEYO."
Iyo… Ugu dambeyntiina, mahadi ha u ahaato Ururka midabaynta Nabadda ee Talyaaniga, tartamayaasha waxaa lagu casuumay inay soo booqdaan bandhiga 120 sawir oo ay sameeyeen carruurta adduunka oo idil.
Ecuador wuxuu soo gabagabeeyey Maarso World